Xulka matalaya Jubaland oo final u fadhiya midkii soo baxa Puntland ama Hiiraan/Shabeellaha Dhexe – Africa Sports Network
Xulka matalaya Jubaland oo final u fadhiya midkii soo baxa Puntland ama Hiiraan/Shabeellaha Dhexe
Jul 23, 2016 WARARKA 0 1407 Views By Tajuddin
Muqdisho,Soomaaliya ( AFRICASPORTS.NET) – Xulka matalaya maamulka Jubaland ayaa u soo baxay finalka Koobka caayaraha kubadda cagta ee maamul goboleedyada, kadib markii ciyaartii Sema finalka ay rigoorayaal uga adkaadeen ciyaartoyda Gobolka Banaadir oo tartanka marti gelinaya gelinkii dambe ee shalay oo Jimce aheyd.
Ciyaartii shalay oo ahead mid xamaasad leh ayay dad badan filayeen inay Finalka u soo baxayaan Ciyaartoyda mataleysa Gobolka Banaadir, balse ma dhicin, iyadoo ciyaartoyda Jubaland ay ahaayeen kuwo dar dar la soo baxay, isla markaana fursado dhowr ah iska khasaariyay.
Garoonka ayaa waxaa soo buuxiyay taageerayaal aad u fara badan oo u kala sacba-tumayay labada koox ee ciyaarayay.
Labada dhinac ayaa wax goolal ah iska dhalin labadii qeyb ee ciyaarta, waxaana taasi keentay in loo dhigo rigoorayaal, si loogu kala baxo.
Ciyaartoyda Banaadir ayaa ku dhawaaday inay finalka iska xaadiriyaan, kadib markii mid ka mid ah ciyaaryahanada Jubaland uu rigooro khasaariyay, isla markaana rigooradii guusha aheyd oo looga fadhiyay inay dhaliyaan Banaadir ay iska khasaariyeen, sidaasna ay ku soo noolaatay rajadii Jubaland.
Intaas kadib ayaa Goolhayaha Banaadir waxaa uu khasaariyay rigooradii loo dhigay, taasoo u suura gelisay in ciyaartoyda Jubaland ay rigoorayaashii la dhigay 9-8 ku badiyaan, isla markaana ku xaqiijiyaan inay u soo baxaan finalka.
Galabta oo Sabti ah waxaa ciyaar adag ay dhex mari doontaa ciyaartoyda ku ciyaareys Puntland iyo Hiiraan/Shabeellaha Dhexe, waxaana labadii koox ee soo gudubta ay finalka la ciyaari doontaa Kooxda Jubaland.
Banaadir, Hiiraan/Shabeellaha Dhexe, Jubaland, Puntland, tartanka Kubadda cagta ee maamul goboleedyada dalka
Kooxda Sunderland oo yeelatay tababare cusub Manchester United boss : " One more player will arrive "
Manchester, United Kingdom ( Agencies + AFRICASPORTS.NET) - Manchester United boss Jose Mourinho has confirmed that the Red Devils are...